Ny lisitra faniriana varotra madinidinika kely | Martech Zone
Ny lisitra faniriana varotra orinasa kely 2014
Talata, Desambra 31, 2013 Talata, Desambra 31, 2013 Douglas Karr
Mety ho taona 2014 ve isika rehetra mitsahatra tsy manenjika zavatra mamirapiratra ary miverina amin'ny paikadim-barotra marina? Ry zazalahy, manantena aho fa… nahita orinasa marobe nanenjika fironana adala isika tato anatin'ny taona vitsivitsy. Rehefa ritra ny teti-bolan'izy ireo nefa tsy misy valiny, izany no nahatonga azy ireo niantso. Betsaka loatra ny isan'isa ary nanodina ny kiboko nijery ny sasany amin'ireo orinasam-teknolojia sy masoivohom-pirenena mivadika fako sy fakana vola amina taonina amin'ny teti-bolan'ny orinasa kely marina.
Araka ny j2 Fanadihadiana momba ny vinavina manerantany:
28.16% te hampitombo ny fisian'izy ireo an-tserasera, toy ny fananganana tranokala na fivarotana an-tserasera.
23.61% te handray automatique marketing mailaka hahatratra ny mpanjifa mora sy mahomby.
20.52% te hampiasa mailaka hanentanana ny fanahin'ny referral sy fizarana amin'ny tambajotra sosialy.
13.76% te hampihatra ny fomba fanao tsara indrindra amin'ny marketing amin'ny finday sy ny fanatsarana ny tranokala.
11.05% te-hiantoka ny ezaka amin'ny mailaka ataon'izy ireo amin'ny mailaka dia tsy miafara amin'ny sivana spam na kiheba Gmail.
Te hahafanta-javatra aho paikadin'ny varotra horonantsary dia teo am-panadihadiana. Raha misy elanelana eo amin'ny hevitro, mety ho ny orinasa kely izao dia afaka misoratra amina serivisy marketing an-tsary mora vidy maro mba hamoahana ny hafatr'izy ireo. Hanampy azy ireo hifaninana amin'ny teti-bola lehibe kokoa noho izy ireo izany ary handresy.
Tags: Lisitra faniriana 2014mailakaj2 Globalj2 Vinavinan'izao tontolo izaoj2 Fanadihadiana momba ny vinavina manerantanyFivarotana finday sy tablettefinday-barotrafandraharahana madinika
Asa Marketing amin'ny Video
Veloma ary fialamboly tsara amin'ny Marketing amin'ny 2013